Tarihi Basmane Garı Tıp Bayramı Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapacak - RayHaber
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 IzmirMake မှပွဲ Host မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာနေ့နေ့စွဲ Basmane ဘူတာ
Make မှပွဲ Host မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာနေ့နေ့စွဲ Basmane ဘူတာ
07 / 03 / 2018 Levent Ozen 35 Izmir, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနေ့အပတ်မတ်လ 14 Izmir အင်တာဗျူးအတွက်ဖုံးလွှမ်း, ညီလာခံ, ပြပွဲ, ရုပ်ရှင်ပြခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပပါလိမ့်မည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနေ့အခန်း၏လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် Izmir ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြေညာချက်ကိုအောက်ပါအတိုင်း;
မတ်လ 14 ဖြစ်စဉ်ကို, ဆေးဝါးနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဘို့ငါတို့တောင်းဆိုမှုကိုကြီးပြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာများ၏အရေးကြီးသောကာလတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဆေးသမားဦးစားပေးအဖြစ် Izmir ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်ကျွန်တော်အရေးကြီးသောအရာရှိများမည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်သောပြဿနာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွှတ်တော်အမတ်များဤပြဿနာအပေါ်အမြင်, ကြှနျုပျတို့ကနျြးမာရေးဝန်ကြီးဌာနမတိုင်မီနိုင်ငံရေးပါတီများမျှဝေပါ။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အစီအစဉ်များအောင်၏တန်ဖိုးသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုံလည်ရန်ပုံငွေတိုးမြှင့်, အကြမ်းဖက်မှုအပေါ်ကျန်းမာရေးပြုပြင်မွမ်းမံအခြေခံလစာ၏အဆင့်ကိုစစ်တပ်နှင့်တရားစီရင်ရေးန်ထမ်းများ၏ဖယ်ရှားရေးအတွက်ပင်စင်လစာတိုးမြှင့်, ဖမ်းဆီးရမိပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးတောင်းဆိုမှုကိုထိုကဲ့သို့သောအလုပ်များစွာကိုနောက်လိုက်တစ်ဦးဖြစ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
Izmir, Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတွက်မတ်လ 14 ဆေးပညာနေ့ဒီနှစ်အိမ်မှာအတူတူလာအဖွဲ့အစည်းများကဆုံးဖြတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူကျင်းပပါလိမ့်မည်။
Izmir, Izmir ပြည်နယ်ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒြေနှင့်ဌာနမှူးဒီနှစ်အကြောင်း, အဆိုပါစည်းရုံးရေးကော်မတီကိုလည်းကျန်းမာရေးညွှန်ကြားမှုကိုလည်းİzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကူညီပံ့ပိုးရန်ဆက်လက်သိရသည်ပါဝင်သည်။ Izmir ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဘုံဘိုင်ယခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့င်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏တဦးတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
တာဝန်ရှိသူတဦးကအခမ်းအနားများ, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဖြစ်မတ်လသမ္မတနိုင်ငံရင်ပြင်နှင့် Ege တက္ကသိုလ်အတွက်Atatürkမော်ကွန်းတိုင်များ၏ရှေ့မှောက်၌ 14 အခမ်းအနားနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မည်နှင့် Ataturk ယဉ်ကျေးမှုစင်တာအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်။
ဒီအခမ်းအနားမှာဖွင့်လှစ်မိန့်ခွန်းကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ plaquetted ဖြည်သောအလုပ်အကိုင်အတွက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီးယခုနှစ် 40 နှင့်ပါမောက္ခဒေါက်တာ Sait eğrilmezရဲ့ "ဆေးပညာအတွက်သီချင်းများ" ၏စာရွက်စာတမ်းတင်ဆက်မှုအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်မှုနှင့်အတူဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးနောက်
တရားဝင်အခမ်းအနားအပြီးတွင် 14 မတ်လ, Basmane ဘူတာမိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ shared အစီအစဉ်များ (14-28 မတ်လ) မှနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ယခုနှစ်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပသင်သည်တန်ဖိုးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်İzmirအတူယူဆောင်ပါလိမ့်မည်, ကနျြးမာရေးသမိုင်းပြပွဲသည်ယခင်နှစ်ပေါင်းအတွက်အစီအစဉ်တွင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုယူပြီးခဲ့ကြသည်။
အမိမြေCezayirlioğlu Khaldun ဘူတာဆေးရုံဓာတ်ပုံပြပွဲနှင့် Dr. ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သမိုင်းဝင် Basmane ဟောင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအပြင် Turhan Sofuoğlu'naလူနာတင်ယာဉ် & Models ပြပွဲရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။
ပြပွဲ၏ဦးဆောင်အခြားကို item xnumx'l ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Wagon အမှုဆောင် TCDD ရာနှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်စတင်ခဲ့သည်။ 1920 ဟာ့ဒ်ဝဲဂျာမဏီနှင့်များစွာသောအရပ်တို့ကို ယူ. သူကိုဆေးသမား၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ Anatolia အတွက်ရထားလမ်း၏ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုဘယ်မှာလက်လှမ်းအတွက်ထုတ်လုပ်သောဤကားများအတွင်းပါရှိသည်။
ကနျြးမာရေးသမိုင်းပြပွဲအပေါ် Basmane ဘူတာပြည်သူ့ Conferences ကကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်။
အသေးစိတ်သမိုင်းမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာလှည်းဘုံဘိုင်နှင့်ကျွန်တော် Izmir အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းညီလာခံစိတ်ဝင်စားနေသော၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအတိုင်းလိုက်နာရနျကြှနျုပျတို့၏ကလူတိုက်တွန်းကြသည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်မှအွန်ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်ပံ့ပိုးမှုများကို၏လူပေးအပ်ရမည်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြပွဲသမိုင်းမတ်လ 14 ကျနော်တို့ပြပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြ။
ဒါရိုက်တာ Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဘုတ်အဖွဲ့, ကျွန်တော်တစ်ဦး timeless အတိတ်တစ်နှစ်အဖြစ်ယခုနှစ်ပုံနှိပ်နီးပါးဟာမမေ့နိုင်သောတဦးတည်းကဒေါက်တာ Merten özbakkaloğlu၏အမည်နှင့်အတူကြိုးအလှူငွေမဆိုပုံစံလှသောအခွန်ဆက်ရည်စူးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများ၏ပထမဆုံးအချိန်နှင့် Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်းများအတွက်ကျင်းပကျန်းမာရေးသမိုင်းပြပွဲ, ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
လှုပ်ရှားမှုများဆေးဘက်ဆိုင်ရာနေ့မတ်လ 14 နယ်ပယ်,
ပါမောက္ခဒေါက်တာ Oguz tigris, အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 13, Atatürkပညာရေးနှင့်သုတေသနဆေးရုံ, ဆေးရုံ "ကနျြးမာရေးအပေါ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်အတူအင်တာဗျူး" ဟုစကားပြောဆိုမှုအပေါ်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒေါက်တာ Tuhan Sofuoglu, ကြာသပတေးနေ့မတ်လ 15, Tepecik သင်တန်းနှင့်သုတေသနဆေးရုံ, "သမိုင်းထဲမှာ Izmir ဆေးရုံ" ပေါ်တွင်တစ်ဦးတင်ပြချက်စေမည်။
ဒေါက်တာ ပြပွဲဝမ်းမြောက်သောစိတ် Ekinci "ပေါ်တွင် Cross-ချုပ်နှင့်အတူဆေးပညာ" Orhan အချိန်အစည်းအဝေးခန်းမများ၏မတ်လ 12-20 Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်းပွင့်လင်းတည်နေကြလိမ့်မည်အကြား။
မတ်လ 13 အင်္ဂါနေ့ညနေတွင်အဆိုပါ Khan ကဇာတ်ရုံ, "မိနစ် 120 နှုန်းနှလုံးခုန်နှုန်း" ရုပ်ရှင်ပြကျင်းပပါလိမ့်မည်။ လက်မှတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲကနေရယူနိုင်ပါတယ်။
TCDD 2019 ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ထိုအဖြစ်အပျက်၏ Fuat Sezgin တစ်နှစ်တာ Host မှဖြစ်လိမ့်မည် 24 / 01 / 2019 နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်မြို့ပတ် '' 2019 ပါမောက္ခကွှေးကျွော ဒေါက်တာ Fuat Sezgin တစ်နှစ်တာ '' ဒါကြောင့် TCDD ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Fuat Sezgin အစ္စလာမ့်သိပ္ပံသမိုင်းသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (İBTAV) နှင့် Kirikkale တက္ကသိုလ်အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနား၏ Protocol ကိုဇန်နဝါရီလ 23 2018 အသေးစားအစည်းအဝေး၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကခန်းမထဲမှာကျင်းပခဲ့သည်။ Apaydin: အလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပရိုတိုကော "ကျနော်တို့ TCDD ကျဆင်းသောကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြုလိမ့်မည်" နှင့်သမ္မတမြို့ပတ် "ပါမောက္ခအဖြစ်ကြေညာ ဒေါက်တာ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ၏အရေးပါမှုအပေါ်အလေးပေးနှင့်အတူ Fuat Sezgin တစ်နှစ်တာ " İsa Apaydınအစ္စလာမ်ဘာသာပါမောက္ခများ၏သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုမှကျိန် ဆို. ပူဇော်အစ္စလာမ်ဘာသာမှမိမိကိုမိမိ ဒေါက်တာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကို လုပ်. ၏ဆက်စပ်တှငျဖျောပွထားဘူးသောလှုပ်ရှားမှုများ Fuat Sezgin ရဲ့နိဒါန်း ...
ချောကလက်၏ပွဲတော် Host မှနေ့စွဲ Sirkeci ရထားဘူတာ 30 / 11 / 2016 အတူ 11 ကနေဖေဖော်ဝါရီလ 144တစ်လျှောက်လုံးရာအရပ်ကိုကြာပေးသော Sirkeci ရထားဘူတာ, နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးမတ်ေတာ၏ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်အစ္စတန်ဘူလ်၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချောကလက်ပွဲတော်သမိုင်း: ချောကလက်ပွဲတော် Make Host မှနေ့စွဲ Sirkeci ရထားဘူတာ။ နိုင်ငံအများအပြားတွင် 'ချောကလက်ပွဲတော်' 'Medyadoktor သူတို့ကိုတူရကီအတွက်ချောကလက်ယဉ်ကျေးမှုပြောပြရန်အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် 11-12-13 14 ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 နေ့စွဲအတွက်ချောကလက်ချစ်သူများရောက်စေဖို့ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လာတယ်။ Social Responsibility ဖေဖော်ဝါရီလကြားရှိတူရကီ၏ပထမဦးဆုံး "အစ္စတန်ဘူလ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချောကလက်ပွဲတော်" 11-12-13-14 2017 ပျံ့နှံ့ပျြောရှငျမှုကြီးထွားလာမည်အစ္စတန်ဘူလ် Sirkeci ဘူတာထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည်။ က Valentine Day ကိုချောကလက်ပွဲတော်၌တည်လိမ့်မည်ဟုညွှန်ပြ ...
Rayhaber,Rayİhale ve RaillyNews Globaltransportforum'un düzenlediği raylı sistem etkinliklerine basın ortağı oldu 21 / 06 / 2013 Rayhaber ve Raillynews Globaltransportforum'un düzenlediği raylı sistem etkinliklerine basın ortağı oldu : Türkiye ve dünyadaki raylı sistemler alanında yapılan gelişmeleri,anında ve en doğru şekilde haber yapmayı sosyal bir sorumluluk projesi olarak algılamış ve raylı sistemlerle ilgili haberlerde farkındalık yaratmak için kurulmuş olan RayHABER sitemiz, Rayİhale sitemiz ve İngilizce olarak hizmet veren RaillyNews sitemiz Globaltransportforum'un düzenlediği Transit Communications , Railway Telecommunications , CBTC World Congress raylı sistem etkinliklerine basın ortağı oldu. Etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi almak ve Basın ortaklıklarına göz atmak için lütfen TIKLAYINIZ Raylı sistemler dünyasındaki tüm gelişmelere anında ulaşmak için …
ဝန်ကြီး Arslan, GMO ရဲ့ 63 ။ အဆိုပါနှစ်မြောက်ပွဲပူးပေါင်းမည် 18 / 12 / 2017 ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan ရှိရာစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန် 15 နှစ်ပေါင်းအမှတ်မှာဝန်ကြီးချုပ် Binali Yildirim အားထုတ်မှုကပြောသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အစီအစဉ်၏ပြင်းထန်မှု၏ညဥ့်များတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်အမ်းစထရောင်းဝန်ကြီးချုပ် Binali Yildirim, သင်တန်းသားများကို Lightning မှနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့သည်။ Arslan, သူတို့နောက်ထပ်ရွှေ့ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်းကြောင်းရှင်းပြရေကြောင်း "ဒီသင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါသည်, ထိုlimancılıklနှင့်ရေကြောင်းကအခြားဒေသတွေမှာပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကဒီမင်္ဂလာလမ်းလျှောက်ဖို့သင်နှင့်အတူဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီပြဿနာအပေါ်အလှူငွေနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကနေလူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ " သူကပြောပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် Yildirim Arslan ရေကြောင်းဧရိယာပြောနေကြပါတယ်တူရကီအတွက်ယနေ့အလွန်အရေးကြီးသောသာဓကပင်ဖြစ်သည် ...
နှင်းလျှောစီးချန်ပီယံရှစ် Host ပြု Davraz 01 / 03 / 2014 Davraz နှင်းလျှောစီးချန်ပီယံရှစ်ထုတ်လုပ်သူအ Host မှ: လူငယ်န်ဆောင်မှုများ၏ Isparta ပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာနှင်းလျှောစီးအငယ်တန်း, ကြယ်, လူငယ်ချန်ပီယံရှစ်တူရကီဖြစ်ရပ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ထို့အပြင်လူငယ်နှင်းလျှောစီးချန်ပီယံ Isparta အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်သူကိုမတ်လ Davraz ဂျူနီယာနှင်းလျှောစီးစင်တာ 1-2, ကြယ်, ယင်း၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယ Ahmet Yildirim, လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာဌာနခွဲ Manager ကို Fatma ၏ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆုံး, နှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများ, နှင်းလျှောစီးပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ် Genghis kazaz နှင့်နည်းပြကြီးသားအပေါင်းတို့, အစီအစဉ်များနှင့်အစီအစဉ်များလိုအပ်သောလူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒါရိုက်တာ Murat ပြတ်သားမီနှင့်ပြီးနောက်ချန်ပီယံတွေ့ဆုံမေးမြန်းသောအစည်းအဝေးတွင်သတင်းအချက်အလက်ပေး "2014 ...
TCDD 2019 ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ထိုအဖြစ်အပျက်၏ Fuat Sezgin တစ်နှစ်တာ Host မှဖြစ်လိမ့်မည်
ချောကလက်၏ပွဲတော် Host မှနေ့စွဲ Sirkeci ရထားဘူတာ
ဝန်ကြီး Arslan, GMO ရဲ့ 63 ။ အဆိုပါနှစ်မြောက်ပွဲပူးပေါင်းမည်
Rayhaber,Rayİhale ve RaillyNews Globaltransportforum'un düzenlediği raylı sistem etkinliklerine basın ortağı oldu
နှင်းလျှောစီးချန်ပီယံရှစ် Host ပြု Davraz
UTIKAD2။ FIATA World Congress တွင် '' ပြီးတာနဲ့မူလစာမျက်နှာပိုင်ဆိုင်မှု (အထူးသတင်းများ) Make ဖို့ဘာ
Kepez, အ Otodrag မှလူမျိုး Host မှ